Tafatsangana ankehitriny ny RMDM na Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara.
Naneho ny hatezerany manoloana ny fiverenan’ny tandrevaka nisy hatrizay eo anivon’ny federasionina malagasin’ny baolina kitra ny filohan’ny fikambanana Alefa Barea, Lova Ramisamanana.
SAMBO TOJO OLANA
Maty motera ary notsofin’ny rivotra mahery ny sambo iray antsoina hoe Joby. Nitatitra simenitra aman-jatony taonina izy io ary hikasa ny hihazo an’i Vohémar raha niala teo amin’ny nosy « Prunes ».
NANDRIAKA NY RA
Nandriaka ny ra tamin’iny faran’ny herinandro iny. Raha ny teo anivon’ny zandarimaria manokana dia efa tafiakatra maherin’ny efapolo ny isan’ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga.
Mitombo hatrany ny fitohanan’ny fifamoivoizana vokatry ny tetikasa fanamboaran-dalana eto Antananarivo Renivohitra.
FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO
Mbolalavitr'ezakatanterakanyfamantarana ny toetry ny andromalagasy. Novoizinamafynyhoe hilatsakahatranyamin'ny 0°C ny mari-pànamanombokaamin'ny 21 jolay.
RONGONY TRATRA TENY IVATO
Nisy rongony mahery vaika « Heroine » milanja 6 kilao tratran’ny mpiasan’ny fadin-tseranana teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato omaly.Nodorana avy hatrany mo aizy io taorian’ny fitsirihana izay tsy maintsy natao.
Manahy ny avy eo anivon’ny antoko politika Teza fa antony lehibe mahatonga ity dian’ny filoham-pirenena Malagasy ankehitriny,
Andry Rajoelina, any Frantsa ity ny hametraka fiaraha-mitantana amin’ny frantsay ireo nosy Malagasy na Iles éparses. Famadihan-tanindrazana izany, hoy ny filohany, Jean Louis Rakotoamboa.
Hiatrika ny fampivondronana voalohany taorian’ny nahatafakatra azy ho any amin’ny CAN 2019 ny 2 jona izao ny Barean’i Madagasikara. Hihaona amin’ny ekipam-pirenen’i Luxembourg ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra. Lalao hatao atsy Frantsa.
Eo amin’izay resaka izay hatrany dia rehefa avy nandalo andro vitsy teto an-tanindrazana ilay mpilalao kitra Malagasy milalao ao Frantsa, Dax, dia nanainga ho any frantsa omaly. Hamonjy ny fampivondronana voalohany ny Barea indray ny lehilahy.